Ekoadaoro: Manampy an’i Haiti ny fanjakana · Global Voices teny Malagasy
Ekoadaoro: Manampy an'i Haiti ny fanjakana
Voadika ny 19 Jona 2018 4:26 GMT
Iray volana mahery izay no lasa, mbola mitohy mameno ny pejy voalohany amin'ny gazety iraisam-pirenena ny loza nateraky ny horohorontany tao Haiti. Tsy misy fahasamihafana amin'izany ny ao Ekoadaoro, saingy nifantoka tamin'ny ezaky ny fanjakana Ekoadaoreana sy ny filoha Rafael Correa ary ny andraikitr'izy ireo tamin'ny fitondrana fanampiana sy fanohanana an'i Haiti kosa ny gazety eo an-toerana. Ny filoha Correa no filoham-pirenena voalohany avy amin'ny faritra nitsidika an'i Haiti. Nandritra ny diany, nihaona tamin'ireo miaramila Ekoadaoreana 66 miasa amin'ny Iraka Mpampandry Tany avy amin'ny Firenena Mikambana ao Haiti (MINUSTAH amin'ny fanafohezan-teny frantsay). Maro ireo fikambanana miahy tena nanatevin-daharana ny governemanta mba hanome fanampiana, ka anisan'izany ny fandraisana anjaran'ireo mpitsabo 18 avy amin'ny Ekipam-pirenena Miatrika ny Loza sy ny Vonjy Taitra.
Hercules C-130 avy amin'ny Tafika An'habakabaka Ekoadaoreana mba handeha any Haiti – Sary avy amin'i Miguel Romero, lisansa: Creative Commons.
Naseho tao amin'ny fampahalalam-baovao ao an-toerana ireo sary sy tantara avy amin'ny fampahalalam-baovao ao an-toerana. Bilaogera Ekoadaoreana sady mpanoratra Rubén Darío Buitrón mitsikera ireo mpanao gazety ireo:
No sé por qué los reporteros ecuatorianos abordan el avión del Gobierno y van como manada a Puerto Príncipe, muchos de ellos sin conocer previamente la historia de un pueblo heroico que, junto con Quito, fue la luz para la independencia americana.
No sé para qué van los reporteros de TV, seguramente para enviar o traer imágenes en las cuales habrá drama, dolor, llantos, close up de niños hambrientos, notas sobre rescatistas, informes acerca de lo extraordinariamente solidarios que somos los ecuatorianos, pero, sobre todo, tomas en las principalmente se vea, por favor, no se olviden, el logo del canal para jactarnos de que estuvimos allí.
Tsy fantatro hoe nahoana ireo mpanao gazety Ekoadaoreana no niditra tao amin'ny fiaramanidin'ny governemanta ary nandeha tahaka ny andiany iray tany Port-au-Prince, izay maro tamin'izy ireo no tsy mahafantatra akory ny tantaran'ny vahoaka mahery fo teo aloha, izay, miaraka amin'i Quito, no fahazavana ho an'ny fahaleovantena Amerikana.
Tsy fantatro hoe nahoana ireo mpitati-baovao amin'ny fahitalavitra no nandeha, azo antoka fa mba handefa na hitondra sary misy ny loza, ny fahoriana, ny tabataba, akaiky ny ankizy noana, tantara momba ny famonjena, tantara momba ny firaisankina mahatalanjona ataon'ny Ekoadaoreana, saingy, ambonin'izany rehetra izany, aza adinoina azafady ny sary hitan'ny olona, ny fangon'ny fantsona mba hampahatsiahy antsika fa teo izahay.
Taty aoriana, rehefa nody i Correa, dia nampiantrano sy nitarika fivoriana manokana nataon'ny Firaisan'ny Firenena Amerikana Atsimo (UNASUR) , izay natrehan'ny Filohan'i Haiti, René Preval ihany koa. Nanome vola 300 tapitrisa dolara amerikana ho fanampiana ireo tetik'asa fanarenana ny UNASUR. Nanaraka ny fivoaran'ny fivoriana niaraka tamin'ny fanavaozam-baovao tsy tapaka, miaraka amin'ireo fampahalalam-baovao ilay mpisera Twitter Ekoadaoreana Rosa María Torres (@rosamariatorres): @Presidencia_Ec, @elcomerciocom, @el_telegrafo, @radio_sucre.
Na izany aza, nisy tantara iray hafa mirazotra tamin'ny fihaonana tamin'ny fandraisana anjaran'ny filoha Kolombiana Alvaro Uribe, izay manana fifandraisana sarotra amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy ny firenena noho ny disadisa ara-tsisintany tamin'ny taona 2008. Na izany aza, nilaza ireo filoham-pirenena roa fa nisosa tsara ny fihaonana ary mety manamarika ny fiakaran'ny fifandraisana diplaomatika eo amin'ireo firenena roa.